Chindwin Journal - Do you know who she is?
Home Do you know who she is? 6Hot myanmar Model...Read more... mp...Read more... Myanmarmodels ...Read more... NEW FACE MODEL mAY lAY...Read more...	advertisement	Do you know who she is?	Written by Administrator	Saturday, 28 May 2011	21 June 2011 1 USD(You Buy) 794 Ks 21 June 2011 1 USD(You Sell) 790 ~ 791 Ks 20 June 2011 1 USD(You Buy) 794 ~ 795 Ks 20 June 2011 1 USD(You Sell) 790 Ks လူထုကြောက်နေတယ် ဖြည်းဖြည်းလုပ်မယ် လူထုကြောက်နေတယ် ဖြည်းဖြည်းလုပ်မယ်ဘီဘီစီ ရေဒီယို ဖိုး အစီအစဉ်က နှစ်စဉ်တင်ဆက် နေကြ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နယ်ပယ် အသီးသီးက ထင်ရှားသူတွေရဲ့ ရေဒီယိုကနေ တဆင့် ပို့ချတဲ့ Reith Lecture လို့ ခေါ်တဲ့ အစီအစဉ်မှာ ဒီနှစ်တော့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပို့ချချက် နှစ်ခုကို ပို့ချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့အခြေအနေမှန်ကို သိထားတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုဒီပို့ချချက်တွေအတွက် ဘီဘီစီက ရန်ကုန်လာပြီး ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့မှာ ဘီဘီစီ ကမ္ဘာ့ သတင်း အယ်ဒီတာ ဂျွန် ဆင်ပဆင်လည်း ပါလာပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ အိမ်မှာ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အိမ်ပေါက်ဝကနေ ခြံဝင်းထဲကို ဂျွန် ဆင်ပဆင်နဲ့ အတူထွက်လာ တာမှာ မြန်မာအင်္ကျီ အဝါရောင် လက်ရှည်ကို ဝတ်ထားပြီး အဝါရောင် နှင်းဆီပန်း သုံးပွင့်ကို ခေါင်းရဲ့ညာဘက်မှာ ပန်ထားပါတယ်။ဂျွန် ဆင်ပဆင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားနေတာတွေကို လူတွေက အားရပုံမရဘူး၊ လမ်းပေါ်ထွက် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် စည်းရုံးလှုပ်ရှား သင့်တယ်လို့ မေးပြော ပြောလိုက်တဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ ဒါကို စဉ်းစားမိတဲ့ အကြောင်း၊ လူတွေ ပြောဆိုကြတာကိုလည်း သူသိတဲ့ အကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးမှာက နည်းလမ်းတခုတည်း ပဲ ရှိတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဂျွန် ဆင်ပဆင်နဲ့တွေ့ဆုံရာမှာ အနည်းငယ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေပုံရပေမယ့် မေးတာကို သေချာနားထောင်ပြီး ပြတ်ပြတ် သားသား အဖြေပေး ပါတယ်။တူနီးရှားနဲ့ အီဂျစ်မှာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂျွန်ဆင်ပဆင်က မေးခဲ့သလို ဒေါ်စုကလည်း ဟိုမှာ အာဏာရှင်တွေကို ဖြုတ်ချ နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာ စစ်တပ်က လူထုကို ပစ်သတ်တာမျိုး မရှိဘူး၊ ဒီမှာက သတ်မှာလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက လူထုဟာ လုံခြုံတယ်လို့ မခံစားရဘဲ ကြောက်နေကြတယ်၊ ကြောက်တာဟာ အဆိုးဝါးဆုံး ကိစ္စဖြစ်တယ်၊ မလုံခြုံမှုကို ခံစားရတဲ့အခါ ထိတ်လန့် စိုးရွံ့နေကြရတယ်။ ဒါကြောင့် လူထုဟာ ဖိနှိပ်ခံထားရသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ တကယ့်လူထု ခံစားချက်ကို ခံစားမှုအပြည့်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဘီဘီစီ ကမ္ဘာ့သတင်းအယ်ဒီတာ ဂျွန် ဆင်ပဆင်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကိုယ်တိုင် တွေ့မေးခဲ့သလို Reith ပို့ချမှုတွေမှာ ပြောခဲ့တာတွေကို ကောက်ယူ သုံးသပ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အကြမ်းဖက် လူထုလှုပ်ရှားမှုနဲ့ အစိုးရကို ရင်ဆိုင်တာထက် အချိန်ယူ ပြင်ဆင်ပြီးမှ လှုပ်ရှားသွားမယ့် သဘောရှိတယ်လို့ စောကြောမိကြောင်း သုံးသပ် ပြောဆို ပါတယ်။Reith လက်ချာတွေကို လာမယ့် ဇွန်လ ၂၈ ရက် နဲ့ ဇူလိုင် ၅ ရက် အင်္ဂါနေ့ မနက်တွေမှာ ဘီဘီစီ ရေဒီယို ဖိုးကနေ တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်လွှမ်းမိုးမှု ဒေါ်စုအတွက်မကောင်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လွှမ်းမိုးမှုများလာတာဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ ဘီဘီစီ ကမ္ဘာ့သတင်း အယ်ဒီတာ ဂျွန် ဆင်ပဆင်က ဘီဘီစီ ရေဒီယို ဖိုး ကို ပြောပါတယ်။ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးရာ သိပ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ ဘီဘီစီ ကမ္ဘာ့သတင်းအယ်ဒီတာ ဆင်ပဆင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်က ဒေါ်စု နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်လာတော့ ဂျွန် ဆင်ပဆင်ဟာ ရန်ကုန်ကို ရောက်သွားပြီး ဒေါ်စုနဲ့ ပထမဆုံးအင်တာဗျူးကို မေးမြန်းနိုင်ခဲ့ သူပါ၊ အခု ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် သူ ရန်ကုန်ကို ထပ်ရောက် သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်စု နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွှတ်မြောက် ပြီး နောက်မှာ လူထုက လမ်းပေါ် ထွက်မလာတဲ့ အတွက် အစိုးရက ကြိတ်ပြီး ဝမ်းသာနေပြီး တိုင်းပြည်ကို နည်းအသစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်မယ်လို့ ထင်ကြောင်း သူက သုံးသပ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်မြောက်နေပေမယ့် နိုင်ငံရေး အရတော့ ဘာမှလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမနေဘူးလို့ ဘီဘီစီကမ္ဘာ့သတင်းအယ်ဒီတာက ထင်မြင်ချက် ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ထောက်ခံသူတွေဟာ အာဖရိက မြောက်ပိုင်းနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေကို စောင့်ကြည့်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဲဒီလို လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်လာဖို့ကို ဖြစ်စေချင်ပုံ ရတယ်လို့ သူ ယူဆကြောင်း ဂျွန် ဆင်ပဆင် က ပြောပါတယ်။ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်မှာ ဒေါ်စု ထွက်ဆိုမည်ကွန်ဂရက်မှာ ဒေါ်စု ထွက်ဆိုမည်။မြန်မာ နိုင်ငံမှာ မနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည်က အမေရိကန် ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်ရဲ့ နိုင်ငံခြား ရေးရာ အာရှ ဆပ်ကော်မတီမှာ ဗီဒီယိုက တဆင့် ရှင်းလင်း ပြောကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မနက်ဖန် ဇွန်လ နှစ်ဆယ့်နှစ်ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မြန်မာ စံတော်ချိန် ည ဆယ့်တစ်နာရီမှာ ဒီကြားနာမှုကို ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်ကို ကွန်ဂရက် ဝက်ဆိုက်ကနေ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှု့ နားဆင် နိုင်ပါတယ်။အင်တာနက် လိပ်စာက www.hcfa.house.gov ဖြစ်ပါတယ်။အတုအယောက် ရွေးကောက်ပွဲနောက် အမှန်တရားနဲ့ ရှေ့ခရီးကြမ်းလို့ နံမယ် ပေးထားတဲ့ ကြားနာမှုမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အပြင် ယူအက်စ ကင်ပိန်းဖော် ဘားမားက အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ဒင်လည်း ထွက်ဆိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီးယူ ခရီးစဉ်ကနေ ဘာမျှော်လင့် နိုင်မလဲမြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်နေတဲ့ ဥရောပ သံတမန်အဖွဲ့ဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ သလို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နဲ့ စီအာ ပီပီ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံ ခဲ့ကြ ပါတယ်။အီးယူ အဖွဲ့ က ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နဲ့ တွေ့ခဲ့မြန်မာ အစိုးရ အဖွဲ့ ဒုတိယ သမ္မတ သီဟ သူရ ဦးတင်အောင် မြင့်ဦးနဲ့ တော့ တနင်္လာ နေ့က နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်။သုံးရက်တာ ခရီးစဉ်ရဲ့ ပထမဆုံးနေ့ ဖြစ်တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ တုန်းကတော့ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ ပါတယ်။ဘာတွေ ဆွေးနွေး ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ မသိရသေး ပါဘူး။အီးယူ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာ အစိုးရနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကြိုးပမ်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိတယ်လို့ အီးယူရဲ့ မူဝါဒတွေကို မြန်မာ့ ဒီမို ကရေစီရေး အတွက် အကျိုး ရှိအောင် လုပ်ဖို့ စည်းရုံး ဆောင်ရွက် လေ့ ရှိတဲ့ Burma Campaign UK က ဒါရိုက်တာ မာ့ခ် ဖာမနာက ပြောပါတယ်။အမေရိကန်က မြန်မာ အစိုးရနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံရေး မူနဲ့ ပိတ်ဆို့ အရေး ယူရေး မူဝါဒကို ယှဉ်တွဲ ပြီး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်း လာချိန်မှာ အီးယူ ဘက်ကလည်း ထိတွေ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင် လိုလာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ တုန်းက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လေးရာ လောက်ကို လွှတ်ပေး ခဲ့တာ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အခု သမ္မတသစ် ဦးသိန်းစိန်ကတော့ အဲဒီ လောက် တောင် လွှတ်မပေး တာကို ကြည့်ရင် မြန်မာ အစိုးရ သစ် အနေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်လိုတဲ့ ဆန္ဒရှိပုံ မရ ဘူး ဆိုတာ တွေ့ရတယ် လို့လည်း မာ့ခ် ဖာမနာက ပြော ပါတယ်။မြန်မာ နိုင်ငံကို သွားတဲ့ အီးယူ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့မှာ ဥရောပ သမဂ္ဂရဲ့ နိုင်ငံခြား ရေးရာ မူဝါဒ အကြီးအကဲ ကက်သရင်း အက်ရ်ှတန်ရဲ့ အကြံပေး အရာရှိ မစ္စတာ ရောဘတ် ကူပါ ဦးဆောင် လာတာ ဖြစ်ပြီး အီးယူရဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ပီယာရို ဖာ့ဆီနိုလည်း ပါဝင် ပါတယ်။အီးယူက မြန်မာ နိုင်ငံ အပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ အရေးယူ ထားတာကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ကလည်း နောက်ထပ် သက်တမ်း တစ်နှစ် တိုးခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေ ဥရောပ ကို လာရောက်ခွင့် ဗီဇာ စည်းမျဉ်းတချို့ ကိုတော့ လျော့ပေါ့ ပေးခဲ့ ပါတယ်။ီ) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံတကာကွန်ရက် စာမျက်နှာ လွှင့်တင်2011-06-19နိုင်ငံတကာက မြန်မာ့အရေး ကူညီ ဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နိုင်ငံတကာ အင်တာနက်ကွန်ရက် စာမျက်နှာတခုကို ဒီကနေ့ နေ့စွဲနဲ့ ဖွင့်လှစ် ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။Aung San Suu Kyi International Network လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ ဒီ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို လွှင့်တင်ရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က… လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးတခု ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ လူလူချင်း သတင်းအချက်အလက် ဆက်သွယ် စီးဆင်းနေဖို့ အရေးကြီးကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တရားမျှတရေးနဲ့ သာယာဝပြောရေး အတွက် အင်အားတွေ စုစည်းရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီကွန်ရက်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီကနေ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေ အဖြေရှာနိုင်ဖို့ စိတ်ကူးနဲ့ အကြံအစည်တွေ၊ အမြင်တွေ ဖလှယ်နိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပွဲ အချိန်မှာ လွှင့်တင်တာဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး စာမျက်နှာမှာ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Richard Lugar ၊ Beatles တေးဂီတအဖွဲ့က ကွယ်လွန်သူ John Lennon ရဲ့ဇနီး လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ Yoko Ono တို့ရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၆ နှစ်မြောက် မွေးနေ့တွင် စတင် လွှင့်တင်ထုတ်ဝေလိုက်သည့် Aung San Suu Kyi International Network အင်တာနက်စာမျက်နှာ။ ကျပ်ငွေ ရှားပါးသောကြောင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးအခက်ကြုံ	နရီလင်းလက်	Thursday, 02 June 2011 18:49	မြန်မာပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေလဲနှုန်း များကြောင့် ပြည်ပတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်သူများ မိသားစုထံ ငွေလွှဲရာတွင် နစ်နာ ဆုံးရှုံးလျက်ရှိသည်။ ကျပ်ငွေ ရှားပါးနေပြီး နိုင်ငံခြားငွေဈေးများ ထိုးကျနေသောကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ငွေလွှဲမည့်သူများ အခက်ကြုံနေရသည် (ဓာတ်ပုံ - http://www.gilesorr.com)အမေရိကန် ဒေါ်လာသည် မြန်မာငွေ ကျပ် ၈၀၀ အောက်သို့ စံချိန်တင် ကျဆင်းနေပြီး ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ငွေလဲနှုန်းမှာ တဒေါ်လာလျှင် ၇၈၅ ကျပ် ဖြစ်နေသည်။ ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျဆင်းနေခြင်းသည် လတ်တလော အခြေအနေတွင် ပြည်သူလူထု လက်အတွင်း မြန်မာငွေ ကုန်သွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညိုက ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။ “ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတွေက ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ဒေါ်လာတွေ ရောင်းထုတ်ပြီး ကျပ်ငွေတွေနဲ့ အိမ်ခြံမြေ လေလံဆွဲတာတွေ တော်တော် လုပ်လိုက်တော့ ဒီအချက်ကြောင့်လည်း ပါတယ်။ သာမန် ပြည်သူလူထုကတော့ လက်ထဲမှာ ဒေါ်လာ မရှိဘူးလေ” ဟု သူက ပြောသည်။ လက်ရှိ မြန်မာငွေတန်ဖိုး မာနေသောကြောင့် မိသားစုထံ လစဉ် ငွေလွှဲနေခြင်းကို ခေတ္တ ရပ်နားထားသည်ဟု စင်္ကာပူရှိ ကုမ္ပဏီတခုတွင် စာရင်းကိုင် လုပ်ကိုင်နေသူ မသူဇာထွန်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ “မြန်မာပြည်က ကိုယ့်မိသားစု အိမ်လခ ၊ ကျောင်းလခ ပေးရမယ့် အနေအထားမျိုး ဆိုရင်တော့ အရှုံးခံ ပြီး လွှဲရမှာပဲ ” ဟု သူက ပြောသည်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံ IT ကုမ္ပဏီတခုတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် ကိုအောင်နိုင်ကလည်း “ စင်္ကာပူ ၁ ဒေါ်လာကို မနေ့က မြန်မာကျပ်ငွေ ၆၄၀ လောက်အထိ ကျသွားတယ်။ စင်္ကာပူငွေ ၁၀၀၀ လွှဲတာ မြန်မာငွေ ၁ သိန်းကျော် လောက် နာတယ်” ဟု ပြောသည်။ ငွေကြေး ဖလှယ်ရာတွင် အရှုံးပေါ်ခြင်းအပြင်၊ ကျဆင်းမှု မရှိသည့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြောင့် ပိုမို ကျပ်တည်းနေကြသည်။ “အမ အမျိုးသားက ပြည်ပ သင်္ဘောလိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့ ငွေလွှဲရင် ကုမ္ပဏီက ဒေါ်လာ ယူမလား ၊ မြန်မာငွေနဲ့ လဲမလားဆိုပြီး ရွေးချယ်လို့ရတယ်။ များသောအားဖြင့် ဒေါ်လာ ယူတာများတယ်။ လက်ရှိ ဒေါ်လာဈေးကျနေတော့ တခါလဲရင် ပမာဏများရင် များသလို သိန်းချီ နစ်နာတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့နေ အိမ်ထောင်ရှင်မ တဦးက ပြောပြသည်။ ငွေလဲနှုန်း အပြောင်းအလဲ များသော်လည်း ငွေလွှဲသည့် လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း မရှိပေ။ “သူ့ ဟာနဲ့ သူ လွှဲနေတဲ့ သူတွေကတော့ ရှိတာပဲ။ မလေးမှာဆို မြန်မာ အလုပ်သမားတွေက အများကြီးပဲ။ နယ်ကရော ရန်ကုန်က လူတွေပါ ပါတော့ တလ တခါ မိသားစုက ဒီကနေ လွှဲမှ လည်ပတ်နိုင်မှာမျိုးတွေ ရှိတယ်လေ။ ဈေးကျလည်း လွှဲရတာပဲ။ လောလောဆယ် မလေးငွေ ၁ ကျပ်ကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၆၄ ရှိတယ်” ဟု မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ မသင်းသင်းက ပြောသည်။ ငွေလဲနှုန်း တည်ငြိမ်မှု မရှိသည့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာကဲ့သို့ ငွေလဲဈေးနှုန်းထားများ တရားဝင် သတ်မှတ်သင့်သည်ဟု ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညိုက သုံးသပ်ပြသည်။“အစိုးရကနေ ၆ ကျပ်နဲ့ ကိုင်ထားတာမျိုးတွေ လုပ်လို့မရဘူး။ ဥပမာ ဓာတ်ဆီ တဂါလံကို သူရောင်းနေတဲ့ ဈေး ၂၅၀၀ ကျပ်ဆို ဒေါ်လာနဲ့ဆို ၄၀ လောက် ဖြစ်သွားပြီ။ ကမ္ဘာမှာ ဈေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီတော့ ၁ ဂါလံ ၂ ဒေါ်လာခွဲ ၊ ၃ ဒေါ်လာ လောက်နဲ့ ရောင်း ဒီဈေးတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး ၆ ကျပ်ကနေ သင့်လျော်တဲ့ ဈေးသတ်မှတ်ပေးသင့်တယ်”ဟု သူက ပြောသည်။ ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်း ကျဆင်းလာမှုသည် ပြည်တွင်း ၀ယ်လိုအား ကျဆင်းမှု၊ နယ်စပ်ဒေသ မူးယစ်ဆေးလုပ်ငန်းမှ ဒေါ်လာ အမြောက်အမြား ဈေးကွက်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာမှု ၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်မည့် လုပ်ငန်းများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေများ ၀င်ရောက်လာမှု တို့နှင့် ဆက်နွယ်နေသည်ဟု လုပ်ငန်းရှင်များက ယူဆနေကြသည်။ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသတွင် ထိုင်းငွေ ၁ ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ ၂၅ ကျပ်၊ ကျပ် တသိန်းလျှင် ထိုင်းဘတ် ၃၇၀၀ ကျပ်ဈေး ပေါက်နေသောကြောင့် မြန်မာငွေ ၀ယ်ယူ စုဆောင်း နေသည်ဟု တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင် ဒေသခံ တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးမှာလည်း လက်ရှိ အခြေအနေတွင် အရောင်းအ၀ယ် အေးနေကြောင်း သိရသည်။ “နယ်စပ်ကုန်သည်တွေကတော့ မြန်မာငွေ တန်ဖိုး မာနေတော့ ဈေးအရောင်းအ၀ယ် မကိုက်ဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့။ တရုတ်ဘက်က သွင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေက တရုတ်ငွေနဲ့ ၀ယ်ရတာ ဆိုတော့ အခု မနက်တင် ၈-၁ ဖြစ်သွားပြီ။ ၈ ယွမ်ဆို မြန်မာ ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ် ရှိတယ်” ဟု မူဆယ် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းမှ အဖွဲ့ဝင် တဦးက ဆိုသည်။ သူက ဆက်၍ “လောလောဆယ် သွင်းမယ့် ကုန်တွေ ခဏ ရပ်ထားတယ်။ မြန်မာငွေကလည်း ထပ် တက်ဦးမယ့် သဘော ရှိနေတယ်။ တရုတ်ငွေနဲ့ ရောင်းပြီး မြန်မာငွေနဲ့ ပြန်ဝယ်တော့ ရှုံးတယ်၊ မကိုက်ဘူးပေါ့” ဟု ပြောသည်။ ဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေလဲနှုန်း၏ ဒဏ်ကို ခံနေရသူများထဲတွင် ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဒေါ်လာဖြင့် လစာ ရရှိနေသည့် ၀န်ထမ်းများလည်း ပါဝင်သည်။တချို့သော အလုပ်ရှင်တို့က အခမဲ့ ဈေးဝယ်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးခြင်း၊ ရှားပါးစရိတ် ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ၀န်ထမ်းတို့၏ အကျပ်အတည်း ပြေလည်စေရန် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ &lt;br&gt; Last Updated ( Wednesday, 22 June 2011 )